बैदेशिक रोजगारीको कमाईलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याऔं 2076/09/20 मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सृजना नहुँदा यहाँबाट सयकडौ यूवाहरु दिनहुँ बिदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरु बिदेशमा गएर कमाएका रकम आफ्नो घर पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा मुलुक अहिले रेमिटान्सकै रकमबाट धानिएको छ । विदेशबाटै पठाएको रकमले गर्दा उनीहरुको घरवार समेत चलेको छ । .... विस्तृत
उखु किसानहरुको समस्याप्रति ठोस नीति निर्माण गर्नु आवश्यक 2076/09/18 नेपालमै सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने प्रदेश २ को सर्लाही जिल्ला हो । यहाँका अधिकांश कृषक नगदे बालीको रुपमा उखु खेतीमै निर्भर रहन्छन् । उनीहरुले खेती गरेर उत्पादन भएका उखुलाई सर्लाही, रौतहटमा रहेका सुगर मिल्समा बिक्रि गर्ने गरेका छन् । .... विस्तृत
प्रहरीको अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक 2076/09/13 सप्तरीमा भइरहेको विभिन्न अपराधलाई न्युनिकरण गर्न अहिले नेपाल प्रहरी लागिपरेको छ । विभिन्न अपराधिक घटनाको मूल जडो लागु पदार्थ र मदिरा भएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रहरीले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न अभियान नै चलाएको छ । यस्ता अभियानका लागि प्रहरीले छुट्टै सेल समेत बनाएको छ । जसले लागु पदार्थ दुरव्र्यसनी तथा त्यसप्रति प्रोत्साहित गर्नेहरुलाई निस्तेज पार्न लागेको छ । प्रहरीले खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट लागु पदार्थ ओसार पोसार गर्ने गिरोह तथा व्यक्तिलाई विशेष निगरानी गरिरहेको छ । कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न सफल भएको छ । .... विस्तृत
तालाबन्दी गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु जरुरी 2076/09/12 अहिले सप्तरीका स्थानिय तहका कार्यालयहरुमा विवाद कायमै रहेको छ । प्रमुखले आफ्नो मनमानी ढंगले कामकाज गरेको भन्दै कार्यालयमै तालाबन्दी समेत गरिएको छ । सप्तरीका दुई स्थानिय तह डाक्नेश्वरी नगरपालिका र राजगढ गाउँपालिकामा सोही कारण देखाएर स्थानिय तथा विभिनन दलका नेताहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । यसरी कुनै पनि बहानामा कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने गरि नै तालाबन्दी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । यसप्रति स्थानिय प्रशासन मौन रहेको छ । .... विस्तृत
सप्तरीको कुन स्थलको भ्रमण गर्ने बारे सबै मौन 2076/09/10 अंग्रेजी वर्ष २०२० मा सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउन गइरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य पर्यटकहरुलाई नेपालमा रहेको विभिन्न सौन्दर्य स्थलहरुको भ्रमण गराउनु हो । यता प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटीयक स्थलहरुलाई चिनारी गराउन कुनै ठोस कदम चालिएको देखिन्न् । प्रदेश २ को अस्थायीमुकाम जनकपुरमा रहको जानकी मन्दिर बाहेक अन्य स्थलहरुलाई हालसम्म प्रोत्साहनका लागि कुनै प्रकारको सरकारी तयारी देखिन्न् । .... विस्तृत
दुर्घटनामा कमी आउन सकेन् 2076/09/09 अहिले सप्तरीमा पुनः सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छ । प्राय राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना अहिले बढेको छ । तिब्र गतिमा आउने सवारीसाधनहरुले ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटना हुने गरेको छ । .... विस्तृत
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक मारिएको पेन्टागनको पुष्टि 2076/09/09 अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अफगानिस्तानमा एकजना अमेरिकी सैनिक मारिएको समाचारको पुष्टि गरेको छ । अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सैनिक समूहका एकजना सदस्यको ज्यान गएको समाचार सोमबार आएको थियो । .... विस्तृत
सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगोस् 2076/09/09 प्तरी जिल्लाको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने सुख्खायाममा आगलागि, वर्षा मौसममा बाढी तथा जाडो मौसममा शितलहरबाट मानिसहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्ता दैवी प्रकोपबाट बच्नका लागि स्थानिय निकायले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक रहेको छ । .... विस्तृत
लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती ! 2076/09/07 मुलुक भरीका प्रहरी प्रशासन अहिले लागु पदार्थ र यसका सेवनकर्तालाई नियन्त्रण गर्न अभियान नै चलाएको छ । तर, पनि लागु पदार्थ र सेवनकर्ता दिनहुँ बढ्दै गएको छ । लागु पदार्थलाई नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सबै क्षेत्रमा कडाई गर्नका साथै भारतसँग रहेको खुल्ला सीमानामा निगरानी समेत बढाएको छ । यति मात्र नभएर अवैध रुपमा रोपिएका लागु पदार्थ गाँजाका खेती समेत नष्ट गर्ने गरेको छ । यती गर्दा समेत दिनहुँ जसो लागु पदार्थ र सेवनकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । ..... विस्तृत
कुनै पनि विषयमा सामूहिक छलफल आवश्यक 2076/09/07 देशभरै अहिले चिसो बढेपछि विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरु बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ । अत्याधिक चिसोका कारण बालबालिकाहरुलाई विद्यालय आउन समस्या हुने गरेको भन्दै स्थानिय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विद्यालयहरु बन्द गर्न आग्रह गरेको हो । यद्दपी संस्थागत विद्यालयमा भने आप्mनै नियम रहेको छ ।.... विस्तृत
महिला हिंसाका घटना न्युनिकरण हुन सकेन् 2076/09/02 महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको १६ दिन समेत नबित्दा सप्तरीमा महिला हिंसाका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै गएको छ । विगत केही वर्षयता महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान संचालन हुँदै आएपनि महिला हिंसाका घटनाहरुमा कमि भइरहेको देखिन्न् । .... विस्तृत
बीच सडकमै हटिया बजार, व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान पुगोस् 2076/08/30 राजविराजको अति व्यस्त सडकको छेउ र बिचमै विभिन्न बस्तुहरुको हटिया बजार लागिरहेपनि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण हुन पुगेको छैन् । तरकारीदेखी पशुसम्मको बिक्रि हुने केन्द्रको रुपमा विकसीत हुँदै गएको राजविराजस्थित मालपोत सडकखण्ड अहिले दिनहुँ खवरुद्ध हुन्छ । .... विस्तृत
रंगशाला मर्मत गर्ने दायित्व कसको ? 2076/08/29 राजविराजस्थित रंगशाला दिनप्रति दिन जिर्ण हुँदै गएको छ । तर सोही रंगशालाको नाममा विभिन्न कार्य गरेर फाइदा लिनेहरुको समेत कमी छैन् । रंगशालामा माटो भराई, रंगशालामा बत्ति जडान तथा खेलाडी कोठा निर्माण लगायत विभिन्न उपाय लगाई रकम कुम्ल्याउनेहरु छन् । रंगशालाको उचित मर्मत तथा व्यवस्थापन लगायतमा कसैले चासो देखाउँदैनन् । रंगशालालाई भजाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ती गर्नेहरुको कमी छैनन् । .... विस्तृत
मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक 2076/08/26 मानिस ठूलो जातले नभई सोचले हुन्छ । जसकारण प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जातका कारणले हेल्हा गर्न उचित हुँदैन । तर, अहिले पनि समाजमा जातका आधारमा मानिसलाई ठूलो सानो बनाउने गरिन्छ । यसका निम्ति निर्माण भएका कानुनको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा समस्या ज्युँको त्युँ छ । कानुन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो देखिन्छ । .... विस्तृत
सामाजिक विकृती रोक्न सबैको सहयोग अपरिहार्य 2076/08/25 अहिलेको परिवर्तित यूगमा आधुनिकिकरणसँगै विकृती समेत बढेको छ । समाजमा सबैखाले मानिसकहरुको बसोवास हुन्छ । जसमध्ये कोही सकारात्मक सोचका हुन्छन् भने कोही नकारात्मक मात्र राख्छन् । जसले गर्दा समाज सकारात्मक सोचसँगै परिवर्तन हुँदै जाँदा नकारात्मक सोचका व्यक्तिका कारण विभिन्न वाधा अवरोध समेत आउछ । .... विस्तृत
मलखादको अभाव कहिलेसम्म १ 2076/08/25 खेतीको समयमा मलखादको अभाव र चर्को मुल्यमा खरीद गर्ने किसानहरुको बानी नै भइसकेको छ । हरेक वर्ष खेतीको बेला किसानहरु मलखाद पाउने की नपाउने भन्ने दोधारको बीच खेती गर्न लागिपर्छन् । मलखाद हाल्ने समयमा पुरानै रबैया मलखादको अभाव हुन्छ । तै पनि कृषकहरु जसोतसो चर्को मुल्य वा छिमेकी मुलुक भारतबाट मलखाद खरीद गरेर खेती गर्नेगर्छन् । तर, सरकारी निकायले हरेक वर्ष झै मलखादको अभाव हुँदैन, सरकारी कोटाको मलखाद बितरण गर्ने आश्वासन दिन्छ । र आफूले गरेको आश्वासप्रति सरकार अडिक रहन असफल हुन्छ । र कृषकहरु मलखादको अभावले पिरोलिदै जसोतासो खेती सम्पन्न गर्छन् अनि सरकार पनि कानमा तेल हालेर सुस्ताउँछ । .... विस्तृत